Wareega Wareega, Wareega Tooska ah, Baaldiga Labaad - SDPAC
Dai Dong Tien wuxuu ku faanaa inuu horyaal u yahay Teknolojiyada - Naqshadeynta - Qeybinta warshadaha caagga ah
Changzhou SDPAC Co., Ltd. wuxuu ku yaal C5, HUTANG sayniska iyo Teknolojiyada Warshadaha, Wadada Guangdian East, Magaalada Changzhou, oo leh aag ku dhow 10000 m2.
Shirkaddu waxay leedahay maalgashi dhan 20 milyan iyo raasamaal diiwaangashan oo ah 10 milyan. Ma yahay xirfadle ku hawlan nooc kasta oo tayo sare leh naqshadda balastiga ah ee caag ah iyo shirkadaha wax soo saarka, gaar ahaan isticmaalka khafiifka ah ee balaastigga ah ayaa ah jihada horumarka ee shirkadeyda, waxaan haynaa 20 xirfadlayaal dhanka warshadaha ah, shahaado jaamacadeed ama ka sare, oo hadda ku howlan cilmi baarista shirkadaha iyo horumarka, wax soo saarka, tayada, iibka, maaliyada iyo shaqooyinka kale.
Aragtida shirkaddu waa inay "ku dadaasho inay dhisto sumcad caan ah oo dunta caag ah" waxayna sameysay nidaam dhaqameed u gaar ah
1. Macaamiisha: si loo siiyo wax soo saar iyo adeegyo tayo sare leh, in la dhiso is aaminaad, xasilooni, iskaashi guul-wadaag ah.
2. Shaqaalaha: abuuro jawi iswaafajin iyo guul-wada-shaqeyn, garasho, xaqiijin iyo siin ciyaar buuxda qiimaha gaarka ah ee shaqaale kasta.
3. Ku socota bulshada: u hogaansanaanta shuruucda iyo xeerarka qaranka iyo xeerarka warshadaha, lana dhiso shirkado cusub oo cagaar, hal abuur leh oo mahadnaq leh.
3.5GAL GAADIIDKA OO LAGU DHAQAYO GALBIGA
5GAL SALDHIGA BULSHADA OO LAGU Xidho
3.5GAL BAASBIGA OO LAGU XIRAY LIIS
3.3GAL SQUARE OO KU Xidhan LID
The Chen Hsong Group JM MK6 jiilkii ugu dambeeyay ee mashiinka wax lagu shubo ee tamarta lagu keydiyo ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka iyo qalabka wax soo saarka, iyadoo dhowr nooc oo kala ah 120t, 260t, 320t, 650T, iwm. , Mashiinka biyaha barafka, mashiinka nuugista, qalajiyaha, iwm, si loo hubiyo xasiloonida sheyga.
Adeeg loogu talagalay OEMs
Waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay naqshadeeyaan oo ay soo saaraan dhammaan noocyada baakadaha la xiriira alaabada caagga ah iyadoo loo eegayo isticmaalka gaarka ah. Laga soo bilaabo naqshadeynta fikradda, naqshadeynta wax soo saarka, naqshadeynta caaryada, wax soo saarka, iwm